Land in Our Hands – စာမျက်နှာ2– ဖက်ဒရယ်မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်မှု
လွှမ်းခြုံမှုရှိသည့်မြေဥပဒေတစ်ရပ်အတွက် ဒို့မြေကွန်ရက်၏ ရပ်တည်ချက်
အောက်တိုဘာ ၂ဝ၂ဝ ဒို့မြေကွန်ရက်သည် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအသီးသီးမှ တောင်သူငယ်များ၊ တောင်သူလယ်သမားသမဂ္ဂများ၊ ၎င်းတို့နှင့် လက်တွဲဆောင်ရွက်နေကြသော ရပ်ရွာအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မိတ်ဖက်အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ စုပေါင်း၍ မြေယာအရေးလှုပ်ရှားကြသော တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံပါဝင်သည့် စင်္ကြံဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ခိုင်မြဲသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်မှန်မျှတသော ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဖွံ့ ဖြိုးရေး၊ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးများကို ပြည့်မီရရှိစေရေး အားထုတ်ကြရာတွင် လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူများနှင့်…
အနာဂတ်မြေယာအုပ်ချုပ်စီမံမှုတစ်ရပ်ဆီသို့ အပိုင်း(၂) စက်တင်ဘာ ၂ဝ၂ဝ လက်ရှိ အမျိုးသားမြေဥပဒေတစ်ရပ်ပေါ်ထွက်လာရန် ချဉ်းကပ်လုပ်ဆောင်နေမှုများသည် ဖက်ဒရယ် မြေယာအုပ်ချုပ်စီမံမှုအတွက် သို့မဟုတ် ဒေသခံဌာနေတိုင်းရင်းသားများ သို့မဟုတ် မြေအခြေပြု အသက်မွေး၀မ်းကျောင်းပြုသော အခြေခံလူတန်းစားများနှင့် တောင်သူလယ်သမားများ၏ မြေယာ ဆိုင်ရာအခွင့်အရေး လုံခြုံစိတ်ချမှုအတွက် မည်သို့အာမခံချက်ပေးနိုင်မည်နည်းဟူသော မေးခွန်း၏ အဖြေကို ဦးစွာဖော်ထုတ်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏…
မြေ မြေက တန်ဖိုးရှိလား?? မြေ တန်ဖိုးရှိလားလို့ မေးတဲ့အခါ “တန်ဖိုးရှိတာပေါ့” လို့ အားလုံးကဖြေကြပါတယ် . . . ဘယ်နေရာမှာတော့ မြေတစ်ကွက်ကို ဘယ်လောက်တန်တယ် . . . ဘယ်မှာတော့ဖြင့် လယ်တစ်ဧကကို ဘယ်လောက်တန်တယ် ဆိုတာမျိုး ဖြေလေ့ရှိကြပါတယ် . .…
အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဒို့မြေထံဆက်သွယ်ပါ။landsinourhands@gmail.com
အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုမူဝါဒ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ တောင်းဆိုချက်များကို အိတ်ဖွင့်ပေးစာအနေနှင့် အမျိုးသားမြေအသုံးချမှုကောင်စီထံ ၂ဝ၁၉-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း ပေးပို့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၈၉-ဖွဲ့က ပါဝင်ထောက်ခံထားပြီး ၎င်းပေးစာနှင့်ဆက်လျဉ်းသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရပ်ကို ၂ဝ၁၉-ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၆-ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ အပြည့်အစုံကို ဤနေရာတွင် ရယူဖတ်ရှုနိုင်သည်။